Balaa Konkolaataa Magaalaa Burraayyuu keessatti muudateen, miidhaan qaamaa namaa fi qabeenya irra gahe. - NuuralHudaa
Balaa Konkolaataa Magaalaa Burraayyuu keessatti muudateen, miidhaan qaamaa namaa fi qabeenya irra gahe.
Balaan kun guyyaa hardhaa ganda Gafarsaa Gujee(Dirree Gujee) jechuun beekamu keessatti Konkolaataan Fe’iinsaa(ISUZU) fi Miinii Baasiin waliitti bu’uun kan muudate yoo tahu, miidhaan qaamaa nama hedduu fi qabeenya irra kan dhaqqabe tahuu odeeyfannoon argame ni addeessa.
Odeeyfannoo walfakkaatuun naannoma san iddoo naannoo industirii (industrial area) jedhamuun beekamutti Konkolaataan fe’iinsaa humnaa ol fe’ee deemu tokkos garagalee miidhaa guddaa qabeenya irratti dhaqqabsiisuu gabaasni waajjira dhimmoota Komunikeeshiinii Bulchiinsa magaalaa Burraayyuu irraa argame ni addeessa.
Gabaasni waggaa kana keessa Abbaa Tayiitaa Geejiba Federaalaa irra bahe, Adoolessa 2016-Hagayya 2017 yeroo jiru keessatti balaa Tiraafikaa biyyattii keessatti muudateen lubbuun namoota 4500 oli darbuu mul’isa.
October 16, 2021 sa;aa 5:05 pm Update tahe